‘उदक’ : परिचय-अवधारणा
नेपाली साहित्यमा कविताको एक लघुत्तम उप-विधाको रुपमा ‘उदक’ देखा परेको छ । ‘उदक’ संस्कृत भाषाको नाम शब्द हो । ‘उदक’ नेपाली भाषामा तत्सम शब्दको रुपमा प्रयोगमा आएको छ । ‘उदक’ को शाब्दिक अर्थ जल अर्थात् पानी हुने गर्दछ । उदक लेख्ने लेखक/स्रष्टालाई उदककार वा उदक यात्री भन्ने गरिन्छ ।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पङ्क्तिमा क्रमशः एक वटा, दुई वटा र तीन वटा शब्दको प्रयोग गरी विषयवस्तुको उठान, व्याख्या र निष्कर्षमा पुर्याइने कविताको उप-विधाअन्तर्गत काव्यको एक लघुतम रूप नै ‘उदक’ हो ।
नेपाली माटोमा जन्मेर उदाएको ‘उदक’ अनौपचारिक रुपमा लेखन कार्यको थालनी बि.सं. २०७७/०६/२३ देखि भएता पनि संरचनात्मक रुप धारण गरेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत् औपचारिक रुपमा यस विधाको सुरुआत बि.सं. २०७७/०६/२७ गतेको दिन भएको हो ।
नेपाली हावापानी तथा उर्वर भूमिमा जन्मेका नेपाली साहित्यमा कविताको एक सशक्त उप-विधा ‘उदक’को सुरुवातकर्ता आर्त अकुलीन हुनुहुन्छ । उहाँद्वारा लिखित प्रथम उदक निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छ :
/ उदक /
माझी दाइको जाल !
विषयवस्तु वा भाव, भाषा, शैली, लय, बिम्ब, प्रतीक आदि ‘उदक’का संरचक घटकहरु हुन् भने ‘उदक’का विशेषताहरु अन्तर्गत विशिष्टता, सङ्क्षिप्तता, पूर्णता, व्यापकता, हार्दिकता आदि पर्दछन् ।
कविताको उप-विधाको रुपमा रहेको ‘उदक’को बाह्य संरचनात्मक ढाँचाअन्तर्गत तीनवटा पङ्क्ति हुने गर्दछन् । जसअन्तर्गत पहिलो पङ्क्तिमा एक शब्द, दोस्रो पङ्क्तिमा दुई शब्द र तेस्रो पङ्क्तिमा तीन शब्द रहने गर्दछन् । पहिलो पङ्क्तिले परिचय अर्थात् विषयवस्तुको उठान गर्दछ । दोस्रो पङ्क्तिले विषयवस्तुको व्याख्या गर्दछ भने तेस्रो पङ्क्तिले विषयवस्तुको बैठान अर्थात् निष्कर्षमा पुर्याउने कार्य गर्दछ । ‘उदक’मा अक्षर गणना हुँदैन ।
दौँतरी ——————- एक शब्द — विषय उठान
उकाली ओराली ——- दुई शब्द — विषयको व्याख्या
वर पीपल चौतारी ! — तीन शब्द — विषयको निष्कर्ष
त्यसै गरी ‘उदक’को आन्तरिक संरचनामा विषयवस्तु वा
भाव र भाषाशैलीय विन्यास मुख्य रुपमा आएका हुन्छन् । सुन्दर तरिकाले विषयवस्तुको उठान गर्दै उत्कृष्ट तरिकाले भाव उत्कर्षमा पुर्याउन सकेको खण्डमा उदक एक नमुना योग्य बन्न सक्दछ । जीवन र जगतका भोगाइका अनुभूतिहरु ‘उदक’मा आउने गर्दछन् ।
जवानी ——————– एक शब्द — विषय उठान
शीतको थोपा ———— दुई शब्द — विषयको व्याख्या
चिता जलेर खरानी ! — तीन शब्द — विषयको निष्कर्ष
एउटै वाक्यलाई खण्ड – खण्ड गरेर वा व्याकरण विपरित अलग – अलग शब्दलाई जोडेर उदक रचना गर्नु हुँदैन । उदक सिर्जनाका क्रममा एउटै वाक्यलाई भाँचेर अर्थात् टुक्रा पारेर र पृथक शब्दलाई संयोजन गरेर लेख्दा यसको मर्म विपरित हुन जान्छ ।
यस तथ्यलाई उदक स्रष्टाहरुले चिन्तन र मनन गर्नु अति असवश्यक छ । ‘उदक’ रचना गर्दा अन्तिममा आवश्यकता अनुसार लेख्य चिन्हको प्रयोग उचित मानिन्छ ।
काव्यात्मक सौन्दर्य खातिर विषयवस्तुलाई पूर्णता दिन बिम्ब, प्रतिक, अलङ्कार आदिको समुचित प्रयोग अति आवश्यक मानिन्छ । त्यसैले उदकमा पनि यस तथ्यलाई हार्दिक मनन गर्दै स्रष्टाले उदक सिर्जना गरेको खण्डमा उदक उत्कृष्ट हुन सक्दछन् ।
‘उदक’ले साहित्यमा अभिधार्थभन्दा पनि व्यञ्जनार्थ र लक्षणार्थ शब्दशक्तिमा जोड दिन सकेको अवस्थामा सुनमा सुगन्ध हुने गर्दछ । नेपाली साहित्यमा कविताको उपविधाअन्तर्गत ‘उदक’ सुरु भएको केही महिना दिनमै सयौं स्रष्टाहरुले ‘उदक’ लेखन कार्य थाल्नुभएको छ ।
‘उदक’लाई काव्यिक विधाअन्तर्गत लघुतम रूपको मान्यता दिंदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २४ नम्बरमा दर्ता गरेको छ ।
‘उदक’को संरक्षण तथा सम्वर्धनमा खातिर यसबारे छलफल गर्न ‘उदक संवाद समूह’ नामक मेसेन्जर ग्रुप र ‘उदक यात्रा’ नामक फेसबुक पेजमा जोडिन हार्दिक अनुरोध छ ।
‘उदक’ को विकास, संरक्षण तथा सम्वर्धनमा अग्रजहरुको सल्लाह र सुझाव सहित स्रष्टाहरुको सामूहिक एकता हुनु अत्यावस्यक देखिन्छ । भिमराज अम्मै
घो.न.पा.१०पहलमानपुर ——————- आर्त अकुलीन
( लेखक कविताको उपविधा ‘उदक’ प्रवर्तक हुनुहुन्छ )